Mpiaro mangarahara tanteraka ho an'ny iPad anao latsaky ny € 5 | Vaovao IPhone
Mpiaro mangarahara tanteraka ho an'ny iPad latsaky ny 5 €
Efa nanandrana ireo fonony rehetra aho, fa tsy misy toa ny manana "iPad" miboridana eo am-pelatananao, Tsara tokoa! Imbetsaka ianao no manadino noho ny toe-javatra na ny fonony azonao. Ny safidy tsara indrindra dia mpiaro mangarahara, miarova amin'ny rangotra ary aza afenina na atao matevina ny iPad.
Raha mila kalitao ianao dia atoro anao ny Ampinga tsy hita maso de Zagg, fa mitentina € 40 miampy ny vidin'ny fandefasana azy. Raha iray no tadiavinao ara-toekarena manana ny iray amin'ireo ianao Miniinthebox amin'ny € 4,63 ny vidin'ny fandefasana dia ao koa. dia ahitana mpiaro aloha sy aoriana, ary mifanaraka amin'ny iPad 2 sy ny iPad vaovao izy io. Mitondra lamba fanasan-damba ihany koa izy io hanampiana amin'ny fampiharana azy, manoro hevitra anao aho hahita tutorial video ho tonga lafatra, raha tsy manana bubble toa ahy ianao toa tsy manao na inona na inona ianao. Aleoko mividy 10 mora vidy amin'ny lafo iray, na izany aza, efa niaraka nandritra ny roa volana aho ary toy ny vaovao, efa nisoroka vilana teo amin'ny efijery.
Azonao atao ny mividy azy eto, Manoro hevitra anao izahay hisafidy fandefasana maimaim-poana, izay na dia tapa-bolana aza vao tonga, dia tsy miteraka olana velively amin'ny fandefasana.
Rohy - MTB
Fanazavana fanampiny - Vidio ny Smart Case anao 75% mora kokoa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Mpiaro mangarahara tanteraka ho an'ny iPad latsaky ny 5 €
Wandaloop dia hoy izy:
Gnzl, fako tanteraka io mpiaro io. Novidiko io ho famerenanao, ary nariako mihoatra ny 4 euro tao anaty fitoeram-pako. Toa ratsy ny ampahany eo aloha, na dia mitandrina tsara aza ianao, saingy heu ... Fa ny tapany any aoriana kosa dia manana adhesive SO ratsy, izay ahitanao ny takelaka fiarovana mangarahara toa an-jaza. Raha tokony ho tsy hita maso ianao dia manana lamosina alim-pito nilahatra miaraka amin'ny bolan'ny adhesive azo jerena. Mampanaintaina. Azafady aza atolotra ity slop ity ho an'ny vokatra kilasy voalohany toa ny iPad anay. Ny zavatra tsara indrindra hialana amin'ny ratra dia ny fikarakarana ary raha voakotra ianao dia vintana ratsy. Farafaharatsiny rehefa maka ny iPad-nao ianao dia ho afaka hahatsapa ny hatsaran'ny famolavolana sy ny mikasika azy fa tsy ny bikan'ity plastika sinoa ity.
Mamaly an'i Wandaloop
Ralehilahy, sarotra ny mametraka azy tsara, toy ny iPhone ihany, fa raha ataonao tsara dia tonga lafatra.
Heveriko fa tsy ratsy izany.
Mac2WepKey: fanaraha-maso tambajotra miaraka amin'ireo modem Huawei
Ny zavamaniry vs Zombies 1.9.5 dia manampy ambaratonga vaovao sy fanohanana ny Retina Display